VIP | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » VIP
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Nov 28, 2013 in Creative Writing | 30 comments
VIP ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒီစကားလုံးဟာ ကျွန်မတို့လို သာမာန်ပြည်သူတွေအတွက် အတော်နားခါးတဲ့စကားလုံးပါ။ ဒါပေမဲ့လဲနှစ်ပေါင်းများစွာ အသားတကျရှိလာတဲ့စကားလုံးလေးဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သိပ်မဆန်းလှပေမဲ့ အတော်လေးအရေးပါတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ VIP ခုံမို့ပါ၊ VIP လမ်းကြောင်းရှိလို့ပါ။ VIP ခရီးစဉ်မို့ပါ။ VIP လာမှာမို့ ဒီနေ့ဖျက်သိမ်းပါတယ်။ အစရှိသဖြင့် နားမဆံ့အောင်ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ VIP တောင်မှ VVIP, V5IP, V9IP, V14IP အစရှိသဖြင့်ကွဲပြားသေးတယ်။ အဆင့်မြင့်ရင်မြင့်သလောက် V ကပိုသွားတာရယ်။
VIP ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာ ဘာမှအဆန်းအပြားမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီစကားလုံးကိုကြားလိုက်ရင်ကိုပဲ အလိုလိုကိုယ်ကဘေးရောက်သွားသလိုပဲ။ အဲဒီ VIP ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ ကလေးလူကြီးအားလုံးသိကြပါတယ်။
မနေ့ကတော့ သားကကျောင်းပိတ်တာနဲ့သူနဲ့ထိုင်စကားပြောဖြစ်တယ်။ သူ့ကျောင်းအကြောင်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပေါ့။ အဲဒီမှာ စကားစပ်မိရင်းနဲ့ အဲဒီ VIP ဆိုတဲ့ စကားလုံးအကြောင်းရောက်သွားတယ်။ သူက အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပြတယ်။ မေမေရေ အဲဒီ VIP ဆိုတာဘာလဲသိလား တဲ့။ ဟဲ့ဘာဒုန်းဆိုတော့
Very Insane Person တဲ့
အောင်မယ်လေးဟုတ်လိုက်လေခြင်း။ ကျွန်မတို့တခါမှမတွေးဖူးတဲ့ မတွေးမိတဲ့စကားလုံးလေး။ လှလိုက်တာနော်။
ကဲပိတ်သတ်ကြီးရော VIP ကိုဘယ်လိုထပ် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ချင်ပါသေးလဲလို့။ :hint:
ငိ သများပြောဒါဟုတ်ဝူးနော် Wow ပြောဒါ
ကျော်နဲ့ စခန်းကို ခဏ လိုက်ခဲ့ဘာ …
တရားစခန်းကို ပေါဒါဘာ …
တစ်သက်လုံး ပေါက်သွားအောင် ထိုင်ခိုင်းမို့ .. ငိငိငိ
ညလေး ကွကိုယ် ပုဂျွန်မွေးပြီး ဘရန်းတွေ အေးဆေးဝယ်နေပါ…
ကညော့တော့တော့မပြောပါနဲ့ ….ကျုပ်ကို အချဉ်မှတ်လား..ကျုပ်လဲ VIP ပဲ.လက်ရှိဒုသမ္မတနဲ့ နာမည် တစ်လုံးပဲလွဲတယ်…
သောက်သောက်ပီးရင် ရမ်းတတ်တဲ့.. စိုင်းသောက်ရမ်းလား ငင်င်င်င်င်င်…
ဟီဟိ မိုက်တယ် Wow တို့နာမည်ပေးတော်ချက်
Very Ill Person
ရမ်းရမ်း အားနည်း နေလို့ ဥ စားပေးရတာလို့ မှတ်ပါ ယောက်ခမွ။
အဲလာ က တူညားတွေ VIP မှာ နေရာရရင် ပြောတာပေါ့နော်။
ချွေးမွ နဲ့ ယောက်ခမွ များ VIP နေရာ ရကြည့်ပါ။
အဲ ဒီ အဒိပယ် ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
Very Important Person လို့ သာမက…..
Very Intelligent Person လို့ ပါပြောလို့ ရတာပေါ့နော…
၀ုတ်တယ် ၀ုတ်တယ် နာ့ချွေးမွလေးကွ
ပုလင်းဖက်တဲ့ ဒညင်းဝက် says:
VIP ဆိုတာကို သူအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပုံကတော့ ရေလည်လန်းတယ် ။
ကျွန်တော်တော့ အဲဒီစကားလုံးကို မြင်တောင်မမြင်ချင်
ဒါပေမယ့် VIP လို အခွင့်ထူးခံလူသားတော့ ဖြစ်ချင်သေးတယ်
တော်ဘာဘီအေ အဲဒီ VIP ကိုစိတ်နာချက်။ Passport ရုံးမှာ အဲဒီ VIP ခန်းရောက်သွားလို့ ကိုယ့်ထက် ပိုပို VIP ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ညနေစောင်းကရောပဲလေ တော်ဘာဘီအေ ကွ့ကိုယ်ပဲအေးဆေးနေဗျဇီ
VIP ကို သိချင်ရင် ဒီမှာသွားကြည့်
သိကြားမင်းအတွက်တော့ Very Important Person လို့ပဲ အဓိပ္ပါယ်ထွက်တယ်….
ဒဂျားရဲ့ VIP ကဘူများဘာလိမ့်။
အနော်ပြောကြည့်မယ်ညော် အမှားပါရင် ခွေးလွှတ် အဲလေ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါကုန်-
Very Impossible Person- အနော် ပြောပြချင်တာက အပြင်လောကမှ ရဲ ဆိုတဲ့ အသံကြားတာနဲ့ ထွက်ပြေးမယ့်ကောင်တွေက ဖွဘုတ်မှာ မျိုးချစ်သူရဲကောင်း ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင် လုပ်နေသူတွေအတွက် လို့ အနော်ယူဆမိလို့ပါဂျ
ဒါလဲ အဓိပ္ပါယ် နောက်တမျိုးလေးပေါ့
အစုအဖွဲ့တိုင်းမှာ VIP ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်။
ရုံးဌာန တစ်ခုအတွက် ထိုရုံးဌာန၏ အကြီးအကဲ ဦးဆောင်သူ တို့က VIP ပေါ့
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာလည်း ခေါင်းဆောင်သူက သူ့တို့ရဲ့ဆရာ VIP ပါဘဲ။
ဒီလိုဘဲပေါ့ တိုင်းပြည်မှာလည်း အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဖွဲ့လူကြီးတွေက VIP ပါဘဲ။
ကိုယ့်အိမ်မှာဘဲ ပြန်ကြည့်ကြည့်လေ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ထမင်းလက်စုံစားနေတုန်း သားတော်မောင် ဂိမ်းကစားနေရာကနေထလာပြီး သားဗိုက်စာပြီထမင်းစားတော့မယ် ကြက်ဥကြော်ပေးဆိုရင် အမေဖြစ်သူက ထမင်းစားလက်စကိုရပ်ပြီး သားတော်မောင် ထမင်းစားဖို့အရေး ချက်ချင်းထလုပ်ပေးနေဖြစ်တာ ဘာလို့လဲ သိလား အဲဒီအိမ်အတွက် ထိုသားတော်မောင်က VIP မို့ပါဘဲလေ။
ဒါကြောင့် VIP ဆိုတာ စိတ်နာစရာလားလို့။
အင်းအိမ်မှာတော့ ဟုတ်သလိုလိုရှိပေမဲ့ လမ်းပေါ်မှာတော့ ရန်ကုန်သူားတွေအတွက် စိတ်နာစရာစကားလုံးပါ ပဲကိုခင်ခရေ။ နောက်ဆုံးကားလိုင်စင်ဖြေတာတောင် ကိုယ့်အလှည့်ကိုစောင့်နေတုန်း အဲဒီ VIP ဆိုတာကြီး ကားတစ်စင်းပြည့်ရောက်လာရင် သွားပီပဲ။ သူတို့မပြီးမချင်းမနက်မိုးလင်းကတဲကထမင်းထုပ်နဲ့ ထိုင်စောင့် နေရသူတွေသေတာပဲ။ စိတ်နာစရာချည်းပါပဲ ကိုခင်ခရေ။
VIP ကိုအဆိုပါ ကာယကံရှင်တွေကိုယ်နှိုက်ကသတ်မှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲ… လူတွေကသတ်မှတ်ပေးတာဆိုရင်ကောင်းပါတယ်…။
ဒီစိတ်အခြေခံကိုဘယ်ကယူရသလည်းဆိုတော့.. လူသားအားလုံးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတာက.. ယူမှ.. VIP သဘောကို.. သဘောပေါက်နားလည်မယ်.. အဓိပ္ပါယ်ကောက်အမှန်ရမယ်…
ဟုတ်တယ်ဒဂျီးရဲ့။ ဒေါ်စုလိုလူကို V14IP လောက်ပေးရင်တောင် လက်ခံလိုက်နိုင်ဘာဒယ်။ အခုဟာက ၀န်ကြီးကတော့ဈေးဝယ်ထွက်လဲ VIP ဘာမှမဟုတ်ဘူး သူတို့အိမ်ကကားလမ်းပေါ်မောင်းလာရင်တောင် VIP ဖြစ်နေတာအမြင်ကပ်လွန်းလို့ပါ။
Very Important Problem ပါချင်..
ခေတ်စနစ်တိုင်းမှာ ရှိစမြဲပါ၊ ဘီလူးစည်း လူ့စည်း ကျော်မလာဖို့ဘဲ လိုတယ်။ ထိန်းလည်း ထိန်းရင်းနဲ့ ထိန်းသူတွေပဲ ဗွီအိုင်ပီကုန်တာ.. လူဗျာ ကိုယ်မလုပ်ချင်တောင် ကိုယ့်အသိုင်းအဝန်း မိသားစု လုပ်ရင် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး၊ တယောက်စ နှစ်ယောက်စ အတွက်တော့ ဖြစ်ကောင်းပါရဲ့ ကျန်သူအများစုကတော့ လေနဲ့ပဲ လိုက်လုပ်ကြမယ်.. ကိုယ့်အလှည့်လဲရောက်ရော ဒီပုံဒီအချုိး ဒီကြိုးပဲ ကကြမှာ ဓမ္မတာ..
အူးကြောင်ရေ အခုဟာက သူတို့ကိုသူတို့ တပ်တာ သူများတပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့ အရေးကြီးပုတ်ဂိုလုပ်ပြီး အခွင့်အရေးစွတ်ယူနေတာ တောက်ညင်ကပ်ချက်
အော်…… ဒေါ်သဲက VVIP ဆိုတာတွေရှိသေးတာကို မသိသေးဘဲကိုးးးး
လောလောဆယ် ဒေါ်စု ဟာ အော်ဇီ ရဲ့ VVIP ပါခင်ဗျာ။
Very Very I P လို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။
အမေစုလိုလူကိုတော့ ဘယ်နှစ်လုံးပဲတပ်တပ်ပါ ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ။ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
ကြုံ ရ မှာမို့
အားတင်း ထားကြ ကုန်
ကိုယ်လေးစားတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ကတော့ V ဘယ်နှစ်လုံးပဲတပ်တပ် လက်ခုပ်တီးကြိုဆိုလိုက်မှာပါ။ အခုကတော့ ကြည့်မရတဲ့သူတွေမို့ အမြင်ကိုမကြည်တာရယ်
ူVVIP, V5IP, V9IP, V14IP အဲဒါတွေရဲ့ အရှည်ကောက်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်
အာဟိ ဆရာမပြုံးရေ။ သူက အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ Very ကို ဆင့်ပွားထားတာပေါ့။ ဟိုနေ့ကပဲ စူပါမတ်ကက် တခုသွားတာ ကားမှာ V5IP ကပ်ထားတယ်။ VVVVVIP Very VeryVeryVeryVeryIP ပေါ့။ အမြင်ကပ် လို့ကားလေးမှာရပ်ပြီး အဲဒီတံဆိပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးအတင်းပြောနေတုန်း ကောင် မလေးတွေနှစ်ယောက် ရောက်လာပြီးရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ကားပေါ်တက်သွားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သမီးတွေလား ခရိုနီသမီးတွေလားမသိဘူး။ သူတို့ကဘာများအရေးကြီးပုတ်ဂိုဖြစ်ရသတုန်း။ အဲဒါလေးမကျေနပ်တာ ဆရာမရေ။ V9IP ကတော့ အမေစုနေပြည်တော်ကို သမတကြီးနဲ့ပထမဆုံးသွားတွေ့တုန်းက လာကြိုတဲ့သူ့ကားဘေးမှာကပ်ထားတာ V9IP တဲ့။
အစ်မလည်း တောသူလုံးလုံး ဖြစ်နေပါပြီ။ အွန်လိုင်းကလည်း ဖွင့်မရ၊ ဂျာနယ်ကလည်း ၀ယ်မရ၊ တီဗီကတော့ ကလေး အကျင့်ပျက်မှာစိုးလို့ လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီ။ နေတာကလည်း တောကြိုအုံကြားဆိုတော့ တကယ့်ကို ခေတ်နဲ့ အဆက်ပြတ်နေပြီ။